Nebi Muxammad (scw) maadaama uu yahay safiirkii ummadda islaamka, ayuu Eebbe (sw) ugu yeeray arrin degdeg ah, aadna muhiim u ah, kadib markii loo dheelmay xagga samada, si uu si toos ahaaneed ula soo hadlo Rabbigii sarreeyay, ayna uga wada hadlaan arrinta ku saabsan waajibinta salaadda ee ummadda islaamka. Halkan waxaa mudan inaan xusno, in markii hore lagu waajibiyay oo loo soo dhiibay Rasuulka (scw) 50 salaadood, hase ahaatee wuxuu la kulmay Nebi Muse (cs), isagoo kula taliyay inuu u laabto xagga Alle (sw), uuna weydiisto inuu ka khafiifiyo tirada salaadaha, maadaama uu isagu soo arkay qoomkiisii reer Banuu Israa’iil. Sidii ayuu Rasuulka (scw) ugu noqday Eebbe (sw), isagoo sidaas sameeyay dhowr jeer, jeer markii danbe loo soo dhiibay salaado shan, laakiin xagga ajarka ay ka yihiin 50 salaadood oo kale.
Wuxuu haddana u guda galayaa dareynka baahida uu ugu qabo hanuunka Eebbe (sw) ilaa uu ka dhammeystiro suuradda oo dhan. Waa xiriir toos ah oo ay wada qaadanayaan addoonka iyo Rabbigiisa (sw). Allahu akbar, alla maxaa farqi aad u weyn u dhaxeeya salaaddii uu tukan jiray suubbanaha Rasuulka (scw) iyo asxaabtiisii sharafta badnaa iyo salaadaha ay tukanayaan qaar ka mid ah muslimiinta maanta. Ugu danbeyntii, waxaan naftayda iyo tan muslimiinta oo dhan u dardaarmayaa dardaarankii uu noo jeediyay Rasuulka (scw) markii uu saarnaa sariirtii sakaraatka, waxyar kahor intuusan dhimman, kaasoo ahaa “DADOOW SALAADDA, SALAADDA” oo uu ula jeeday aynu ilaalinno salaadda, oo yeynan ka tagin ama dayicin